China bamboo nokwadala ukuba kumgangatho ukutyibilika kumgangatho mveliso kunye nefektri Igolide yoqalo
Imveliso ye-REBO bamboo yenziwe ngemicu yendalo yoqalo, ngokusebenzisa iitoni ezingama-2700 zokucinezela kushushu kunye nenkqubo yekhabhoni, eyenza ibhodi yomelele kakhulu, inzima kwaye yomelele. Ukuhonjiswa kwe-bamboo kuya kusiba ngakumbi kwaye kuthandwa ngakumbi kwiimarike zamanye amazwe. Umphezulu yiprofayili encinci yamaza enomqolo okanye umva obuyileyo.
I-bamboo yangaphandle yimbumba ehlelwe ngokutsha. Impahla eluhlaza okwenziwe ngoqalo lwangaphandle oluluqilima ivuseleleka ngoqalo lwe-moso bamboo, enobungani kwindalo esingqongileyo. Umgangatho we-bamboo onzima wangaphandle uphathwa ngokubanzi ngobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu. Ke ngoko, uxinano lwophahla lwangaphandle olunzima lwangaphandle luphezulu kakhulu kunolo lwesiqhelo somthi kunye nophahla lweenkuni.
Ukuzinza yenye yeenjongo ze-REBO, ukwenza i-REBO Bamboo decking ibe yinyani.
Zininzi izinto ezibangela ukuba abantu abangakumbi nangakumbi bakhethe umtya weemveliso zoqalo zokwakha kunye nokuhombisa. Ezona mpawu ziphambili zophahla lwangaphandle loqalo zinjengeebhanti:
1) Akukho warping, akukho ukuqhekeka, isiliphu ukumelana.
2) Ukuxhathisa kwamanzi, iibhodi zoqalo zeREBO zivavanywa kwiimeko zamanzi kwaye zenziwa kwiCandelo 4, elifanelekileyo ngaphandle, ekunxibelelaneni nomhlaba kunye namanzi amatsha.
3) Akukho mngundo, akukho zinambuzane.
4) Ukumelana nemozulu egqithileyo kunye nemozulu ezahlukeneyo
5) Ukulondolozwa kwendalo, ukugcina izibonelelo zehlathi.
Imveliso ye-REBO bamboo yenziwe ngemicu yendalo yoqalo, ngokusebenzisa iitoni ezingama-2700 zokucinezela kushushu kunye nenkqubo yekhabhoni, eyenza ibhodi yomelele kakhulu, inzima kwaye yomelele. Ukuhonjiswa kwe-bamboo kuya kusiba ngakumbi kwaye kuthandwa ngakumbi kwiimarike zamanye amazwe. Umphezulu yiprofayili encinci yamaza enomqolo okanye umva obuyileyo. Ubude obuqhelekileyo ngu-1860mm, ububanzi obuqhelekileyo ngu-140mm, ubukhulu buyi-18mm. Ewe, ubukhulu bunokuba yi-20mm nangaphezulu. Kuxhomekeka kwizicelo zabathengi.
Egqithileyo I-E1 Eurpean standard eco-friendly bamboo flooring ngaphandle
Okulandelayo: Imozulu E1 iibhodi bamboo umgangatho ukumelana